लुगाहरूबाट नेल पोलिस हटाउने तरिका - उत्तम सुझावहरू र युक्तिहरू बेजिया
सुसाना Godoy | 03/06/2021 14:00 | सुन्दरता
इनामेलहरू उत्तम म्यानिक्योरहरू देखाउन सक्षम हुनका लागि मुख्य पात्र हुन्। हामी तिनीहरूलाई रंग र बान्कीमा संयोजन गर्दछौं तर यसलाई साकार नगरी कहिलेकाँही हामी उनीहरूको थोपा खसाल्न सक्छौं। के तपाईंलाई थाहा छ कपडाबाट नेल पॉलिश कसरी हटाउने? हामीले हामको टाउकोमा हात हाल्नु र सोच्नु भन्दा पहिले सबै हराएको छ, हामी तपाईंलाई धेरै कुरा भन्न सक्छौं।
किनभने कपडाबाट पोलिश हटाउनु अलि जटिल हुन सक्छ, तर हामी सफल हुनेछौं। तपाईंले आफ्नो मनपर्ने शर्ट वा प्यान्टलाई बिदाइ भन्नु पर्दैन केवल किनभने तपाईंको नेल पॉलिश बन्द छ। तपाईंले भर्खरै निम्न चरणहरू र चालहरूमा शर्त लगाउनुपर्दछ जुन तपाईंको लागि हामीसँग छ!
1 एसिटोन बिना कपडाबाट कसरी पोलिश हटाउने
1.1 शोषक कागजको साथ
1.2 बरफको एक टुक्रा लागू गर्नुहोस्
1.3 किरा प्रतिरोधक
1.5 तालमक पाउडर
2 कसरी एउटा कपडा सोफा बाट पोलिश हटाउने
3 कसरी पॉलिएस्टर कपडाबाट पोलिश हटाउने
4 लुगाबाट नेल पोलिसी कसरी छिटो हटाउने
एसिटोन बिना कपडाबाट कसरी पोलिश हटाउने
यो सत्य हो कि जब हामी नेल पोलिश हटाउन चाहन्छौं, हामी एसीटोनमा सहारा लिन्छौं। किनकि केवल एक पटकमा हामी रंगहरू वा डिजाइनहरूलाई अलविदा भन्न सक्छौं वा प्रवृत्ति मैनीक्योर जो हाम्रो साथमा थिए। तर यस अवस्थामा हामी कपडा, कपडाको बारेमा कुरा गर्दैछौं र हामी उनीहरूसँग अलि बढी सावधान हुन चाहन्छौं। त्यसो भए यो पहिलो बिन्दुमा हामी हेर्नेछौं एसिटोन बिना कपडाबाट नेल पोलिसी कसरी हटाउने। ती सबै लेख्नुहोस् किनकि ती तपाईंलाई धेरै सेवा गर्नेछन्!
शोषक कागजको साथ
यदि पोलिश अहिले नै तल झर्छ र अझै गीला छ भने, तब तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ यो एक रुमाल वा यसमा धेरै शोषक भान्सा कागजको एक टुक्रा राख्नु हो। यसले पेन्टलाई पेपरमा परिणत गर्दछ। र यो तपाईंको कपडाबाट हटाउन सजिलो छ। तर सावधान रहनुहोस्, ड्र्याग वा रबिंग नगर्नुहोस् किनकि त्यसो भए तपाईले तामचीनी पनि फैलाउनुहुनेछ। यस गेस्चरको साथ तपाईं अधिकतम रकम हटाउनुहुनेछ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले तातो पानीले लुगा धुनु पर्छ।
बरफको एक टुक्रा लागू गर्नुहोस्
जब दाग गीला हुन्छ, जस्तो कि हामीले भर्खर हेर्‍यौं, यो सामान्य छ कि यो थोरै फैलिन सक्छ। त्यसकारण, यसलाई कडा बनाउन प्रयास गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ। हामी कसरी यो गर्न सक्छौं? आइसको एक टुक्रालाई कपडामा बेर्दैओओ कम्प्रेस। जब तपाईले देख्नुहुन्छ कि यो कठोर छ, तपाईं आफ्नो नail हल्कासँग स्क्र्याच गर्न सक्नुहुन्छ र बिस्तारै पट्टिहरू पछाडि हटाउन सक्नुहुन्छ जुन पछाडि पछाडि हुन्छ।
हो, कि स्प्रे जुन हामीसँग सँधै हातमा हुन्छ हामी कीराहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ, यो लुगाबाट इनेमेल हटाउन हाम्रो उत्तम सहयोगी पनि हुन सक्छ। तपाईले गर्न सक्ने उत्तम कुरा हो कपडा वा टुथब्रशमा थोरै लागू गर्नुहोस् जुन तपाईं अब प्रयोग गर्नुहुन्न। त्यसो भए, यो दाग मा रगिनु समावेश छ, तर प्रश्न मा वस्त्र नाजुक छ यदि मामला मा overboard बिना।
कीराहरूका लागि स्प्रेको रूपमा, यो आइपुग्छ अर्को सबैभन्दा खास उपचार। किनभने यो केहि शर्तहरु को बारे मा हो जुन हामी घरमा घरमा छन् कि हेयरस्प्रे। प्रक्रिया उल्लेख गरिएकोसँग मिल्दोजुल्दो छ, किनकि हामीले थोरै लाह लागु गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि रगनुपर्नेछ। राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न तपाईं यसलाई फेरि टुथब्रशमा गर्न सक्नुहुन्छ।
सबैभन्दा सिफारिश गरिएको उपचारहरू यो हो। जब तपाईं पहिले नै अधिक हटाउनुभएको छ तर दाग अझै बाहिर आउँदैन, तब केहि ट्याल्कम पाउडर लागू गर्नुहोस्। यो राति बस्न दिनुहोस् र भोलि बिहान तपाईंले यसलाई नरम ब्रश दिनुहोस् र सामान्य रूपमा लुगा धुनुहुनेछ।
हामी कुनै पनि हालतमा ज्यादै रग्ल्न र लुगाको सानो क्षेत्रमा पहिले प्रयास गर्ने छौं, यदि यसले केही सामग्रीहरूमा राम्रोसँग प्रतिरोध गर्दछ भने। त्यसोभए हामी त्यसलाई बिगार्दैनौं।
कसरी एउटा कपडा सोफा बाट पोलिश हटाउने
लुगाहरू मुख्य पात्र हुन्, हो, तर यदि तपाईं ओछ्यानमा आफ्ना न nailsहरू पेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र अनौंठा ड्रप झर्दछ भने के हुन्छ? पक्कै पनि यो तपाईंलाई भएको छ किनकि हामी पढ्दै गर्दा तपाईंले बनाएको अनुहार हामीले हेरिरहेका छौं। ठीक छ, त्यहाँ केहि चरणहरू छन् जुन तपाईंले विचारमा लिनु पर्दछ यदि यो फेरि भयो भनेः
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि यो अहिले गिर्यो भने, त्यसपछि हामीले गर्नु पर्छ सकेसम्म फिर्ता लिनुहोस्। त्यो हो, तपाईं सुन्तलाको स्टिक वा तपाईंको आफ्नै हातमा रहेको चम्मचको सहायताले यो गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसोभए याद गर्नुहोस् कागज को चाल। तपाईं यसलाई दाग मा तर माथी बिना राख्नुहोस् ताकि यो अवशोषण गर्न जारी छ।
तपाई पछि फेब्रिकलाई किन्न सक्नुहुन्छ यसलाई एक विशिष्ट अपहोल्स्ट्री उत्पादको साथ सफा गर्नुहोस्। हामी यो गर्छौं जब दाग अब तरल छैन।
एसिटोन सधैं तामचीनी दाग ​​विरूद्ध राम्रो उपाय हो तर सधैं कपडाहरूको लागि होईन। तसर्थ, दृश्य नभएको कुनामा पहिले प्रयास गर्नु उत्तम हुन्छ। तपाईं यसलाई सुक्ने कुर्नुहुन्छ र यदि तपाईंले केहि पनि देख्नुहुन्न भने, त्यसपछि कटनको बल गीलो पार्नुहोस् र हल्का दागमा ड्याब गर्नुहोस्। यसलाई तान्नुहोस्! धीरजी र प्रक्रिया दोहोर्याउने प्रयास गर्नुहोस्। सावधान रहनुहोस्, यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभएको ठाउँमा कपडा बिग्रिएको छ भने, त्यसपछि एसीटोन-मुक्त नेल पॉलिश हटाउने विकल्प छान्नुहोस्।
बेकिंग सोडा र पानीको मिश्रण सोफाको लागि पनि उत्तम छ र यसको तामचीनी दाग। तपाईंले यसमा एउटा कपडा ओसिलो बनाउनु हुन्छ र दागमा यो थिच्नुहोस् कि यसले नेल पोलिश अवशोषित गर्दछ। बिस्तारै तपाईंले यो कसरी हराउनुहुन्छ देख्नुहुनेछ। अब तपाईलाई थाहा छ कि कपडाबाट नेल पोलिश कसरी हटाउने!
कसरी पॉलिएस्टर कपडाबाट पोलिश हटाउने
कत्ति निश्चित तपाईं पहिले नै थाहा छ, जब हामी पोलिस्टरको बारेमा कुरा गर्छौं हामी यसलाई सिन्थेटिक फाइबरबाट बनाउँदछौं जुन कि धेरै सामान्य र व्यापक प्रयोग हुने प्रकारको कपडा हो। त्यसोभए यो पनि हुन सक्छ कि हामीले दाग लगाएको प्रश्नमा रहेको कपडा भनेका कपडाहरूको बनेको छ। त्यसो भए हामी छिटो र सबैभन्दा विश्वसनीय विधिमा शर्त लगाउँछौं। तर होशियार रहनुहोस्, हामीले जहिले पनि लेबललाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्दछ र सानो क्षेत्रमा प्रयास गर्नुपर्दछ ताकि अन्तिम मिनेट आश्चर्यचकित नहोस्।
यस अवस्थामा, बस दाग मा एसीटोन को एक ड्रप राखौं। मात्र त्यो राशि पनीर कभर गर्न पर्याप्त हुनेछ। द्रुत रूपमा हामी के गर्छौं एउटा सुक्खा कपडाले सफा गर्नुपर्छ ताकि यसले तामचीनी पनी अवशोषित गर्दछ। त्यो हो, हामी एसिटोन थप्छौं र त्यसपछि भनिएको कपडाले यसलाई सुकाउँछौं। सधैं थप दाग फैलाउने बेवास्ता गर्नुहोस्। यदि तपाईले देख्नु भयो कि यो पूर्ण रुपमा बाँकी रहेको छैन भने तपाईले सँधै समान तर हाइड्रोजन पेरोक्साइड गर्न सक्नुहुन्छ। हो, यो ती विकल्पहरू मध्ये एक हो जुन सबै कपडाहरूको लागि काम गर्दैन, हामी पहिले नै टिप्पणी गर्दैछौं, तर यो हामीले बुझ्नुपर्दछ कि जब हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौं, यसको नतिजाले हामीलाई पहिले भन्दा धेरै आश्चर्यचकित गर्नेछ। एक तरीका वा अर्को, तपाईं यस प्रकारको दागलाई अलविदा भन्न सक्षम हुनुहुनेछ, तर कहिलेकाँही हामी अलि स्थिर रहनु पर्छ।
लुगाबाट नेल पोलिसी कसरी छिटो हटाउने
हामी हेर्दै छौं, गति आजका जस्तो चालहरूमा हामीसँग सँधै हुँदैन। कहिलेकाँही कुनै प्रक्रिया नभएसम्म हामीले प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्छ। तसर्थ, यो विचारले हामीलाई धेरै मद्दत गर्दछ। केही शोषक कागज नैपकिनहरू राख्नुहोस् र तिनीहरूमा कपडा अनुहार तल। त्यो हो, नैपकिन तिर दाग संग। फेरि र अर्कोतर्फ, हामी थोरै एसीटोन वा हाइड्रोजन पेरोक्साइडको साथ कपासको बल पास गर्न जाँदैछौं। तपाईंले यसलाई धेरै पटकसम्म गर्नुपर्नेछ जब सम्म तपाईं देख्न सक्नुहुन्न कि तामचीनी अब दाग छैन नेपकिनहरू, किनकि यो हराएको छ। अझै, एक दाग हटाउने प्रयोग गर्नुहोस् र सामान्य को रूपमा लुगा धुनुहोस्। के तपाइँसँग योगदान दिन चाहानुभएको कुनै चाल छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » लुगाबाट नेल पॉलिश कसरी हटाउने
यस गर्मीमा तपाइँको वार्डरोबमा थप्न overall ओभरलहरू